Baaskiilada Scotland Highlands
Dooro ikhtiyaarka lagu galo
Ma iska illowday magacaaga?
Fadlan sug, gal galka ...
Guryeynta ama Kirada
Ku dar Liiska Warbixinta
Ku dar Liiska Dalxiiska
Ku dar Diiwaanka Dalxiiska
Ku dar hantida iibka
Soo Gudbi Wadooyinka ama Tareenada
Meelaha Baaskiilka Rabshadaha
Wixii fasax ah
Qof kasta oo aad tahay, wax alla wixii aad raadinayso, wax waliba wuu ka bilaabmaa.
Location	 Drumnadrochit guuhs
Qolalka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dadka waaweyn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Carruurta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Goobta aasaasiga ah
Qiimaha qiimaha	 <GBP49.00	GBP50.00 - GBP99.00	GBP100.00 - GBP149.00	GBP150.00 - GBP199.00	> GBP200.00
Hagaha Hagaha ee Iskuxirka Dhismayaasha Scottish Highlands
Written on 14 November 2014 . Ku dheji Hawlaha
Tweet waxaa Pin
Baaskiilada WoqooyiWaxaa jira naadiyo badan oo baaskiil ah iyo kooxo ololeyaal ah oo badan oo ku yaal Scotland iyo inta kale ee Boqortooyada Midowday. CTC waa mid ka mid ah jirka oo haya dhammaan noocyada isticmaalka wareegga iyo danaha.
Talooyin ku saabsan baaskiil wadida wadooyinka baaskiilka ah Si aad u raacdo Xeerka Wadooyinka - ha ku boodin nalalka cas (red light) oo ha ku wareegin wadada haddii aysan ahayn waddo wareeg ah; Xilliga hawada qulqulaya xawaarahaaga maaddaama dusha laga yaabo in uu ka boodo oo uu kaa qaado waqti dheer si aad u joojiso; Si tartiib ah u raac, si xushmad leh oo si fiican u nadiifiya jidka; Ka feker inaad xidhato koofida; Hayso wadadaada baaskiilka.
Hubi in baabuurlaydu ay ku arki karaan adigoo raacaya meel aad ka arki karto oo aad arki karto; Isticmaal nalalka oo tixgelin inaad xidhato dhar dhalaalaya ama muuqaal leh, gaar ahaan magaalooyinka, habeenkii iyo cimilada xun; Indhahaaga la xiriir dadka isticmaala wadooyinka, gaar ahaan markaad eegto, markaa waad ogtahay inay ku arkaan; Saxeex si cad mar walba; Isticmaal jilbaha - dhamaan dadka lugaynaya ma arki karaan inaad ka warqabto gawaarida Shilalka badani waxay dhacaan marka baaskiil baaskiilka uu ku jiro gudaha baabuurka oo u leexanaya dhinaca bidix. Ha u malayn in gaarigu uu toos u socdo oo kaliya sababtoo ah maaha wax calaamad u ah. Had iyo jeer ka fogow 'qaadista' gaari kasta oo ku jira xaaladdan - waa ka fiicnaaneysaa in dib loo dhigo ilaa gaadhiga uu ka baxo. Talooyin loogu talogalay baabuurlayda Si aad jidad u sameyso sidii ay u noqon lahaayeen, darawaladu waxay u baahan yihiin inay ka warqabaan baaskiilaha sidoo kale: Markaad u jeedinaysid saacadda bidix ee baaskiilada soo socda ee dhinacaaga u dhow oo ha u jarin; Bixinta baaskiilada ballaaran ballaaran marka ay soo gaadhaan;
Habeenkii, ku dhaji nalkaaga marka aad la soconayso baaskiilada; Xilliga hawada qoyan, u oggolow baaskiilaha qolka dheeraadka ah sida meelaha dushooda. Xusuusnow, baaskiilada iyo gawaariduba waxay si siman xaq u leeyihiin inay isticmaalaan oo ay wadaagaan isla waddada. Ixtiraamidda dhammaan dadka isticmaala wadada waxay ka caawisaa qof walba inuu ka faa'iidaysto socdaalka wadada. Wixii faahfaahin dheeraad ah u tag - https://www.gov.uk/browse/driving/highway-code MACLUUMAAD KU SAABSAN KA BILOW
Callander wuxuu ku fadhiyaa bariga bariga ee Loch Lomond iyo Trossachs National Park waana meel fiican oo laga bilaabi karo Scotland Lochs & Glens Cilmi-qurxinta quruxda badan ee galbeedka Scotland ee galbeedka Highland Way. Buuraha daaqa, duufaannada iyo webiyada duufaanka ah waxay isku daraan si ay kuugu abaal mariyaan cimilo gaar ah oo weligeedba socda iyadoo aad u socotid 96 miles oo ka socota Milngavie (Glasgow) ilaa Fort William, oo bixisa Beddel iyo Quraac wadada, ogow duurjoogta duurjoogta ah, , riwaayado sharaf leh safar baaskiil ah oo ka yimid Fort William ilaa Inverness, u safraya qaar ka mid ah muuqaallada ugu dabiiciga ah maalintii iyo samaynta marti-gelinta weyn ee quraacda iyo quraacda habeenkii, Rannoch Moor, Kinlochleven iyada oo loo marayo "Devil's Staircase, Ben Nevis iyo Fort William, ee Isgoyska Aasiya ee Scotland ayaa ku yaala madaxa Loch Linnhe.
Baaskiilaha adoo maraya muuqaalka lochs iyo glens oo ka kooban Loch Lomond & Trossachs Park National iyo Highland Perthshire. Raadi Scotland marka aad mareyso adigoo maraya Parkka Qaranka National Park. Magaalooyinka deyrka leh, riwaayadaha taariikhiga ah, duufaannada Speyside maltaha, goobaha dagaalka Jacobite, Si aad u raaxaysta oo raaxo leh oo raaxo leh si ay u qaataan aragtida baadiyaha ee agagaarka Loch Ness, qaado baaskiil.
Goobta Loch Ness waxay bixisaa dhul ballaaran oo ka soo jeeda qulqulka qulqulka ee Caledonian Canal si ay u ciriiriyan, masaafo dheer, jidadka waddooyinka sida Great Glen Way. Wadooyinka waddooyinka dagan ee Strathnairn iyo dhinaca koonfureed ee lo'du waxay aad u fiican yihiin baaskiilada waxayna jiraan waxyaabo badan oo ah baaskiil aad u fiican. Aagga Strathglass wuxuu bixiyaa khibrad buuran oo raaxo leh si uu ula tartamo meel kasta oo dalka ka mid ah. Dharafku wuxuu ka soo jeeda gudaha Beauly iyo Loch Ness, oo bixiya jidka cirifka ah ee jidka ku yaala, isagoo ku dhammaystiran saddexda quruxda badan ee caanka ah ee Afrik, Cannich iyo Strathfarrer. Meelaha hoose ee Glen Cannich ayaa si aad ah u kordhay tuulada Cannich, iyo daba-gaaban, laakiin qulqulaya qunyar-socodka ah ayaa u oggolaanaya helitaanka jidadka duurjoogta, taas oo ay la socdaan qaar ka mid ah wadada muraayada Mullardoch, waxay kuu qaadan doontaa Loch Mullardoch, 9 miles.
Tani waa aragti cajiib ah, oo ku wareegsan buuraha sare. Fuulitaanka Glen Cannich waa hubaal laakiin wadadu waa mid xasiloon oo dib u soo noqoshada, dhammaan meeshan! Glen Affric, waa la soo dhaweyn karaa iyada oo loo marayo wadooyinka dhirta laga soo bilaabo Cannich iyo Tomich labadaba, joogsada xeebaha Loch Beinn 'Mheadhoin, oo ah maskax biyo ah. Dhanka yaryar ee Tomich iyo Cannich, oo ku yaalla Kareemka ama xitaa Glenmoriston, waa meelo fog fog oo dhan, Waa wadiiqo ladnaan ah Laga soo bilaabo Dog Falls ilaa Knockfin waa mid cajiib ah, sida aad madax u leedahay Tomich, ama laga bilaabo Loch Affric ilaa Tomich iyada oo loo marayo hantida West Guisachan, Cougie iyo Plodda Falls. Inaad ka sii dheeraato, waxaad sii wadi kartaa wadooyinka hoose ee koonfurta Tomich iyo Cannich, oo ku yaal Corrimony ama xitaa in ka badan Glenmoriston, Meesha ugu fiican ee joogitaanka Bedka iyo Fasaxyada waa Hoyga Darawaliinta ee baabuurta la dhigo iyo kaydinta wareegga, lix mayl bilawga muraayadda iyo qurxinta kale ee quruxda badan ee ku yaal aaggan, cunto fiican oo buuxda oo la cuno, iyo bood iyo yaryar si ay u dhameeyaan fiidkii ka hor sariirta, subaxda quraac qurux badan oo aad u qurux badan si aad u sii socotid maalinta oo dhan Steading Highland Glen Xerada
Raadi buuraha, lochs iyo xeebta xeebta ee Isle of Skye marka aad wareegto dhererka iyo ballaca jasiiraddan jilicsan ee buuxa ee duurjoogta iyo jasiiradaha qoxootiga ee ku yaala xeebaha, kuwaas oo ah meelo madadaalo ah oo aad ku raaxeysan karto wakhtiga tayada dhabta ah. Xeebta xeebta xeebta ee Islay waa quruxda Arran, Islay iyo Jura waa meelo aan caadi ahayn oo wareegsan, oo macne cusub u yeesha jasiiradda. Jidadka agagaarka jasiiradaha waa laga goynayaa in uu noqdo mid cajiib ah, marnaba lama ilaawi waayo-aragnimo. Isbeddelka jasiiradda ayaa ah kan ugu fiican ee leh dekedaha iyo dekadaha oo aad ku qaadanaya meelo cusub, oo bixiya Bedka iyo quraacda socdaalka daalacan si habeenkii loo qaato.
Tani waa riyo jecel riwaayad dhab ah, iyadoo siddeed kala duwan oo ku yaal jasiiradaha iyo xayawaan aad u qurux badan iyo Beddel iyo Quraac! Tuulooyinka jasiiradaha ayaa dhammaantood si farxad leh u dillaacsan, duufaantuna waxay dhadhan yihiin dhadhan qaali ah gaar ahaan ka dib wakhti dheer oo baaskiil wadid ah, Socdaal xaq u leh waqooyiga Scotland taas oo micnaheedu yahay in la ogaanayo xeebaha taas oo ah mid cajiib ah.
Baaskiilada agagaarka Dunnet Head waxay kaa qaadeysaa marxalado qurux badan iyo dabeecadaha ku faani kara xeebaha cajiibka ah iyo aragtida jasiiradaha oo aan midna lahayn, Waxaa jira meelo qurux badan oo cajiib ah si ay ugu sii joogaan doorashooyin yar yar oo qoys ah, sida hudheelada oo leh jilicsanaan iyaga ku saabsan. Waxaad ku raaxeysan doontaa soo dhaweyn diirran meel kasta oo aad joogto Scotland, waxaadna ogaan doontaa in meelaha ugu badan ay kuugu keydiyaan bakhaaradaada.
Dib u eegista macaamilka
Raadi dib u eeg
Qor faallooyinka ugu horreeya!
Dib-u-eegidaada Dib u eeg
Magaca qoraaga *
Qor email *
Soo-koobista Heerka *
In badan oo la wadaago? (Ikhtiyaar)
Sharaxaad lagama hayo
Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh:
Ku dar sawir ama fayl
Ku dar goob
Ma tihid robot
Scottish Highlands 7 Maalinta Cimilada Weather
Hagaha Dalxiisayaasha Weyn
Dooro Aagga AberdeenshireAngusArgyllBanffshireCaithnessguuhsKincardineshireMorayNairnshireOrkneyDheecaan HebridesPerthshireRoss & CromartyShetlandSutherland
Tilmaamaha Macluumaadka Fort William
Matxafka Qaranka ee Scotland (Guide)
Tilmaamaha Macluumaadka Booqdaha ee Aberdeenshire
Tusaha Dalxiiska ee Wick Heritage Centre
Tilmaame loogu talagalay Socodka Waddooyinka Scottish Highlands
Guryaha loo yaqaan Glencoe
Tilmaamaha Macluumaadka Booqdaha Glen Urquhart
Isku qor warqadeena iyo wixii ka sii badan
Xayeesiinta Guryaha Dheeraadka ah
Xayeysiinta Hantida iibka
Ku xayeysii Scottish Highlands Tours Free
highland4you © 2016-2018. Dhamaan xuquuqda la keydiyay
Kukiyada waxay fududeyneysaa inay ku siiso adeegyadayada. Adeegsiga adeegyadeena waxaad noo ogolaaneysaa inaad isticmaasho cookies.
Ok Hoos u dhaca